ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သထုံ. ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သည် မွန်ပြည်နယ်၊
ⓘ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သထုံ. ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သည် မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့နယ်၊ ဂေါ့ကျေးရွာရှိ ဝန္ဒာမိတောင်ခြေတွင် တည်ရှိသည်။ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြ ..
မွန်ပြည်နယ်အတွင်းတွင် အစိုးရကွန်ပျူတာကောလိပ်မော်လမြိုင်အား ၂၀၀၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ တွင် အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်မော်လမြိုင် ယခု နည်းပညာတက္ကသိုလ်မော်လမြိုင်)၏ ပရဝုဏ်တွင် စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀ဝ၁ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ကျိုက်မရောမြို့နယ်၊ ညောင်ပင်ဆိပ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ မော်လမြိုင်စက်မှုဇုန် အနီးသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မော်လမြိုင် အဖြစ်သို့ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ပြီး ဘွဲ့ကြို/ဘွဲ့လွန် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မော်လမြိုင်အား သထုံမြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်သထုံအဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်သထုံမှ ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ပို့ချလျှက်ရှိသော သင်တန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်သထုံမှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သော ဘွဲ့ဒီဂရီများနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
4. တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီးများ
ဒေါက်တာဝင်းဌေး ၅-၇-၂၀၁၀ မှ ယနေ့ထိ
ဒေါ်သီသီစော ၇-၈-၂၀ဝ၀ မှ ၂၃-၄-၂၀ဝ၁ ထိ
ဒေါက်တာနေခြည်လဲ့လဲ့သိန်း ၁-၁၁-၂၀ဝ၆ မှ ၇-၄-၂၀ဝ၉ ထိ
ဒေါက်တာနီလာသိန်း ၇-၈-၂၀ဝ၄ မှ ၃၁-၁၀-၂၀ဝ၆ ထိ
ဒေါ်မွန်မွန် ၂၄-၄-၂၀ဝ၁ မှ ၆-၈-၂၀ဝ၄ ထိ
ဒေါက်တာသန္တာသိန်း ၈-၄-၂၀ဝ၉ မှ ၄-၇-၂၀၁၀ ထိ